शिक्षा Archives - Page 12 of 20 - Dna Nepal
चुनाव गराउने सहमति पछि पेकको आन्दोलन स्थगीत १९ मंसिर २०७५, बुधबार १४:३५
पोखरा, मंसिर १९ । दुई सातादेखि अन्यौलमा रहेको पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद समाधान भएको छ । मंगलबार क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थी संगठन बीच बैठक बसेर सहमति खोजिएको हो । स्ववियू चुनावको विषयलाई लिएर क्याम्पसभित्र विद्यार्थी संगठनहरु..
गोरखाबाट हराएका दुई बालक काठमाण्डौंमा भेटिए
पोखरा, मंसिर १९ । मंगलबार विहानदेखि बेपत्ता भएका गोरखाका दुई बालक सम्पर्कमा आएका छन् । गोरखाको शहिद लखन गाऊँपालीकाका दुई बालक विद्यालयबाटै हराएका दुवैजना काठमाण्डौंबाट सम्पर्कमा आएको परिवार श्रोतले जनाएको छ । गोरखा सदरमुकामको द वल्र्ड..
गोरखामा दुई बालक स्कुलबाटै वेपत्ता
गोरखा, मंसिर १९ । गोरखाको शहिद लखन गाऊँपालीकाका दुई बालक विद्यालयबाटै हराएका छन् । गोरखा सदरमुकामको द वल्र्ड क्यापिटल माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने १३ वर्षका प्रज्ववल राना र १४ वर्षका रोशन श्रेष्ठ मंगलबार बिहान देखि हराएका हुन् । शहिद..
उठबस गराउँदा विद्यार्थी बेहोस !, उपचार गर्न अस्पतालमा
काठमाण्डौं, मंसिर १९ । प्युठानस्थित कालीदेवी मावि कक्षा ८ का विद्यार्थी दर्शन गौतम तीन दिन स्कुल आएनन् । मंगलबार आए तर, असहज मान्दै । कारण खोतल्दा थाहा भयो — गािणत शिक्षक बज्रकिशोर शाहले गृहकार्य नगरेको भन्दै उनलार्य १८० पटक उठबस गर्न लगाएछन्..
इक्यान शैक्षिक मेलाको स्टल बुकिङ सूरु १८ मंसिर २०७५, मंगलवार १४:०६
पोखरा, मंसिर १८ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्कीले यही मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना गरेको इक्यान शैक्षिक मेलाका सम्पूर्ण स्टल बुकिङ भएका छन् । इक्यानले मंगलबार स्टल बुकिङ खुलाएको थियो । मेलामा राखिने ७० वटा स्टलहरु बुकिङ खुलाएको..
ति शिक्षक–जसले पढाउन छोड्ने सुनेपछि कक्षाभित्रै विद्यार्थीको रुवावासी चल्यो १७ मंसिर २०७५, सोमबार १३:१९
पोखरा, मंसिर १७ । सरकारी विद्यालय भन्ने वित्तिकै अल्छि शिक्षकको दृष्य आँखामा आईहाल्छ । विद्यार्थी पनि उस्तै, उस्तै भौतिक संरचना । तर सबै माथीको लाईनजस्तो कहाँ हुन्छ र ? गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका स्थित हिमालय मावि । सुविधासम्पन्न भवन, लगनशील..
को बन्ला २९ औं प्रधानन्यायाधीश ? यसअघि अयोग्य भनेर हटाईएका जोशी पनि सिफारिसमा ११ मंसिर २०७५, मंगलवार १३:५५
काठमाण्डौं, मंसिर ११ । न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको २९ औं प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका स्थायी न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा ३ वर्षसम्म स्थायी न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत व्यक्ति..
कुनै युवतीलाई मन पराउनुहुन्छ ? यसरी माग्नुहोस् फोन नम्बर २४ कार्तिक २०७५, शनिबार १४:४७
एजेन्सी, कार्तिक २४ । कोही केटाहरू लजालु किसिमका हुन्छन् र मनको कुरा कसैसँग शेयर गर्दैनन् । अलि फरवार्ड खालका केटाहरू त पहिलो भेटमै केटीको नम्बर हात पार्न सफल हुन्छन् । तर केटीहरूले कहाँ सजिलै नम्बर दिन्छन् र ? यहाँ दिइएका केही टिप्स अपनाउनुभयो..
नक्कली प्रमाणपत्रले जागिर खानेहरु शिक्षकहरु सबैभन्दा धेरै ११ कार्तिक २०७५, आईतवार ०२:४२
काठमाण्डौं, कार्तिक ११ । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बनाएर जागिर खानेमध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षक भेटिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमाथि भएको अनुसन्धानमा नक्कली..
’स्कुल जान त मन लाग्छ’ १० कार्तिक २०७५, शनिबार ०५:१४
सर्लाही, कार्तिक १० । ईश्वरपुर नगरपालिका–२ की पवित्रा ब्लोनले १३ वर्षको उमेरमा एक महिना मात्रै स्कुल टेकेकी छन् । महिना पुगेपछि स्कुलले भर्ना गर्न ‘जन्मदर्ता लिएर आऊ’ भन्यो । भोलिपल्ट बिहानै उनका बुवा सत्यसिंह ब्लोन–तामाङ जन्मदर्ताका लागि..